Soosaarayaasha iyo alaab-qeybiyeyaasha daryeelka shakhsi ahaaneed ee Shiinaha iyo qalabka caafimaadka - Baili Medical
Guriga > Alaabta > Caafimaadka iyo Daryeelka Caafimaadka > Daryeelka Shakhsi ahaaneed iyo Qalabka Caafimaadka
Daryeelka Shakhsi ahaaneed iyo Qalabka Caafimaadka waa erey caan ku ah cuntada caafimaadka. Gb16740-97 "Heerarka guud ee caafimaadka (shaqaale) cuntada" qodobka 3.1 cuntada caafimaadka waxaa lagu qeexaa sida: "Caafimaadka (shaqaale) cuntada waa nooc ka mid ah cuntada, waxay leedahay sifooyinka guud ee cuntada guud, hagaajin kartaa shaqada jidhka bini'aadamka, ku haboon. in dad gaar ah ay cunaan, laakiin aan ujeedadu ahayn in lagu daweeyo cudurrada, sidaas darteed, marka la eego wax soo saarka, ma jiri karaan wax ku ool ah, heerka guusha iyo ereyada kale ee la xidhiidha. .
Daryeelka Shakhsi ahaaneed iyo Qalabka Caafimaadka waxaa badanaa loogu yeeraa Kaabista Cunnada ee dhul weynaha Shiinaha iyo meelaha kale.
Daryeelka Shakhsi ahaaneed iyo Qalabka Caafimaadka wuxuu ka kooban yahay qaybo gaar ah oo waxtar leh, waxay hagaajin karaan shaqada jidhka bini'aadamka, oo leh saameyn gaar ah, oo ku habboon kooxo gaar ah oo dad ah. Cuntada guud ma laha shaqo gaar ah, ma jirto koox gaar ah oo dadka wax cunaya.
Daryeelka Shakhsi ahaaneed iyo Qalabka Caafimaadka si toos ah looma isticmaali karo in lagu daaweeyo cudurrada, waa nidaamiyaha habka jidhka bini'aadamka, nafaqooyinka nafaqada. Daawooyinka waxaa si toos ah loo isticmaalaa in lagu daweeyo cudurka.
suufka dhididka ayaa la xidhiidha suufka dhididka nuugaya jidhka bini'aadamka, kana tirsan qaybta farsamada ee suufka dhididka nuugaya. Waa qaab-dhismeed lakabaysan, qaab-dhismeedka lakabka ah ee u dhow dhinaca maqaarka bini'aadamka oo loogu talagalay maro-hydrophilic ah oo aan tol lahayn, oo u dhow dhinaca dharka ee dharka aan biyaha adkaysin.
Kubbada Vent-ka Daqiiqda Weyn ee Weyn
Daqiiqda cabbirka weyn ee qaanso roobaadyada kubbadda hawo-mareenka waa kubad yar oo ka caawisa dhimista walaaca iyadoo la adeegsanayo muruqyada gacanta. Dhab ahaantii, qalabka noocan oo kale ah maaha inuu u ekaado kubbadda, iyo noocyo kala duwan oo qaabab ah ayaa laga heli karaa suuqa. Muuqaalkeeda ugu muhiimsan ee qeexaya waa in ay si fudud gacanta ugu dhejiso oo ay tahay mid la dareemi karo, taas oo u oggolaanaysa isticmaalaha in uu tuujiyo oo uu qaabeeyo isagoo isticmaalaya kubbadda cadaadiska iyadoo la siinayo iska caabin si ay ugu qasbaan muruqyada gacanta inay shaqeeyaan.
Midabka aan sunta ahayn ee TPR Beddelida Kubadda Cadaadiska leh Summada Gaarka ah
Midabka aan sunta ahayn ee TPR ee Beddelka Kubadda Cadaadiska leh Summada Gaarka ah waa kubad yar oo ka caawisa dhimista walaaca iyadoo la adeegsanayo muruqyada gacanta. Dhab ahaantii, qalabka noocan oo kale ah maaha inuu u ekaado kubbadda, iyo noocyo kala duwan oo qaabab ah ayaa laga heli karaa suuqa. Muuqaalkeeda ugu muhiimsan ee qeexaya waa in ay si fudud gacanta ugu dhejiso oo ay tahay mid la dareemi karo, taas oo u oggolaanaysa isticmaalaha in uu tuujiyo oo uu qaabeeyo isagoo isticmaalaya kubbadda cadaadiska iyadoo la siinayo iska caabin si ay ugu qasbaan muruqyada gacanta inay shaqeeyaan.
Mishiinka hurda ee qaylada cad oo leh 7 nalal oo hurdo ah oo neefsashada ah
Mashiinka hurdo ee qaylada cad oo leh 7 nalalka hadhka neefsashada ayaa soo saaray tignoolajiyad kiciya neerfaha maskaxda si ay dadka ugu riixdo hurdo qoto dheer. Iyadoo ku kicinaysa neerfayaashan garaaca birlab aan waxyeello lahayn, maskaxdu waxay soo saartaa "mowjadaha gaabis ah" ee ka caawiya dadka inay seexdaan hurdo qoto dheer. Saynis yahanadu waxa ay dhiseen mishiin lagu seexdo si loo dhameeyo waagii hurdo la'aanta. Mashiinka hurda ee qumbaha waxaa loo qaabeeyey inta lagu jiro habka hurdo fiican loo seexdo. Curyaasheeda waxay ku fiican yihiin hurdo la'aanta.
Soonada Uumiga Mini ee ku haboon ee isticmaalka Guriga
Isku laabashada habboon ee Mini Personal Steam Sauna ee loogu talagalay isticmaalka guriga waxa sidoo kale loo yaqaan qolka uumiga dhididka, oo asal ahaan ka soo jeeda Finland, waxa ku jira qolka uumiga ee qallalan iyo qolka uumiga qoyan, laakiin dadku waxay badanaa yidhaahdaan qolka saunadu waa qol uumi qalalan, qolka uumiga waa qol uumi qoyan. Saunada dhaqameedku waa in la isticmaalo dhagax macdanta gubanaya, ku shub biyo si ay u soo saaraan uumiga sare, iyo casriga ah waa isticmaalka fog infrared iyo anion si loo gaaro saameynta sauna, qolka sauna wuxuu leeyahay saameyno kala duwan sida dhimista miisaanka, sunta dheecaanka, dheecaanka laabotooyinka. , ku raaxayso macaamilka.
25cm Cadaadiska Qaraxa Caddaynta Kubadda Yoga
25cm Caddaynta Qaraxa Cadaadiska Kubbada Yoga waxaa loo isticmaali karaa in lagu ilaaliyo taam. Waxaa loo yaqaan kubbadda jimicsiga, kubbadda cinjirka waxay u adkeysan kartaa ilaa 400kg oo cadaadis ah. Kubadda jirdhiska waa dhaqdhaqaaq cusub, xiiso leh, dhaqdhaqaaq jimicsi gaar ah, hadda kubbadda jirdhiska jimicsiga dhaqdhaqaaqan oo leh madadaalo, tartiib tartiib ah, badbaado leh, saameyn muuqata, gaar ahaan raxmadda haweenka magaalooyinka
Waxaan haynaa kuwa ugu cusub Daryeelka Shakhsi ahaaneed iyo Qalabka Caafimaadka oo laga sameeyay warshadeena Shiinaha oo ah badeecadeena ugu weyn, oo noqon karta jumlo. Baili waxaa loo yaqaanaa mid ka mid ah Daryeelka Shakhsi ahaaneed iyo Qalabka Caafimaadka soosaarayaasha iyo alaab-qeybiyeyaasha caanka ah ee Shiinaha. Waxaa lagugu soo dhawaynayaa inaad iibsato Daryeelka Shakhsi ahaaneed iyo Qalabka Caafimaadka la habeeyey oo wata liiskayaga qiimaha iyo xigashada. Badeecadahayagu waa shahaado CE waxayna ku jiraan kaydka macaamiisheena si ay wax uga doortaan. Waxaan si dhab ah u rajaynaynaa wada shaqayntiina.